यो साता यी राशिको चम्कनेछ भाग्य ? हेर्नुहोस ! - News Bihani
प्रकाशित मिति : शनिबार, फाल्गुन ३, २०७६
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)- यो साता यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ । पारिवारिक उल्झनमापरि काम विग्रिएला । स्वास्थ्यमा खर्च बढ्नेछ । सरकारी निकाएको भयपनि रहनेछ । साताको उत्तरार्धबाट नयाँ काम वा रोजगार पाईनेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,८ र शुभरङ्ग घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णुजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो)- यो साता छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा होला । सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । पठनपाठनका क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवनमा मधुरता छाउनेछ । घर,जग्गाको कारोबारमा सफलता मिल्नेछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व हनुमानजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा-महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । पार्टी पिकनिक तथा सेमिनारमा सहभागी भईएला । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा दुष्ट व्यक्तिको संगतले आत्मघाती काम गर्न पुगिएला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग खौरो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महालक्ष्मीजीको दर्शनगरी यात्रा गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो)- लामो समयदेखिका बाधाहरू स्वतस् फुकुवा हुनेछन् । प्रेममा मधुरता छाउनेछ । मंगल कार्यको योगछ । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनसक्छ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सकिनेछ । राज्यबाट मान सम्मानपनि पाइनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,५ र शुभरङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)- यो साता मनमा देखिने अस्थिरता अधैर्यताका कारण निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ । यात्रामा मालसामान हराउनपनि सक्छ । पेटसम्बन्धी समस्याले पिरोल्न सक्छ । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । मध्य सातामा भने लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग गुलाबी वा सुन्तलारङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको दर्शन गर्नाले अधिक सफलता हात पर्नेछ ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो)- यो साता घरमा धार्मिक कृत्यको योगछ । पुरानो समस्या सुल्झाउन सकिनेछ । राजनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । साताको मध्यमा मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । वैचारिक मनमुटाव बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,९ र शुभरङ्ग रातो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)- यो साता नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ । समाजिक कार्यमा मन जाला । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । बोलीको प्रभावपनि बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)- ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्ला । चुनौतीहरूसमेत सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । पेट सम्बधी समस्या आउला । बुधबार पछिका दिनमा सहजता महसुस होला । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग सेतो वा कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि विष्णुजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे)- यो साता आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेलाछ । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले तपाईंका विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,५ र शुभरङ्ग हरियो गुलाबी वा हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि)- रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । बुधबारबाट प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनेछ । शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग सुन्तला हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व देवीजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा)- यो साता जोश जाँगर र हिम्मत वढ्नेछ । धार्मिक यात्राको योगछ । रोकिएको काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा फाइदा हुनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागी भइएला । बन्धु बान्धवबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साताको उत्तरार्धबाट व्यापार व्यवसायमा बाधा आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,६ र शुभरङ्ग कलेजी हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भगवतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि)- यो साता गरेका काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्नेछ । यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ । मध्य साताबाट इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग पहेँलो वा गाढा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा लाभ मिल्नेछ ।
( अधिक जानकारीको लागि = ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल- ९८४९५५९५०२ )